Shiinaha Custom logo daabacaadda midabka logo 350g warqad kaarka cad sanduuqa dibadda saaraha iyo qeybiye | Huaguang
Sanduuqa Kaararka Kafeega
Cabir: 17 * 8 * 3.5cm
Nooca Waraaqaha: kaarka cad
Faahfaahinta Baakadaha: 50 kumbuyuutar oo ku jira bacaha ama shuruudahaaga
Tirada (Khaanadaha) 1 - 5000 5001 - 50000 > 50000
Baabuurd sanduuqa xirxirida ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Tusaale ahaan, warshadaha cuntada, waxaa jira gaari kafee ahd sanduuqyada, gaariga nacnacad sanduuqyada, gaariga cookied sanduuqyada iyo wixii la mid ah. Warshadaha quruxda ayaa badan, sida sanduuqa kaararka lipstick, sanduuqa kaarka maaskaro,toner sanduuqa kaararka iyo wixii la mid ah; Waxa kale oo jira warshadaha kabaha iyo dharka, sida sharaabaadyo, dhar, nigis IWM. Marka la barbardhigo sanduuqa hadiyadda, sanduuqa kaarka ayaa ka jaban, sanduuqa kaararka waa la laaban karaa, taas oo si weyn u badbaadinaysa kharashka gaadiidka. Sanduuqa kaararka ayaa u fiican sida sanduuqa hadiyadaha xagga naqshadeynta, tayada iyo muuqaalka. Maanta, aan wadaagno qaar ka mid ah sanaadiiqda kaararka quruxda badan:
1. Sanduuqyada Kaararka ayaa sidoo kale laga dhigi karaa sanduuqyo hadiyadeed, iyadoo la adeegsanayo kaar cad oo 400g ah, daabacaad afar-midab leh, UV qayb ahaan ah, filim matte ah oo dusha ka daboolaya, sanduuqa oo dhan dhin-goyn, sanduuqa isku laaban calaamadda calaamadaha, marka la barbar dhigo sanduuqa hadiyadaha kartoonka. isku mid, laakiin waxay dareemeysaa mid ka duwan.
2. Baakadaha kaarka-fasalka ah ee baakadka, alaabada mideysan ee ilaalinta deegaanka, 350 garaam oo ah warqad gaar ah oo kaararka cuntada ah, filim matte ah, oo aan xabag lahayn, ayaa lagu laaban karaa sanduuq, looma baahna in laga walwalo sanduuqa inuu cuntada sumaysan doono.
3. 350 garaam oo kaar cadaan ah, afar midab daabacan, dusha sare ee filimka matte, ka dib isku laabashadu waxay noqon kartaa sanduuqa kaararka polygonal, fur daboolka sanduuqa si aad u dhigto sonkorta faraxsan, moodada iyo quruxda badan.
4. 300g kaar cadaan ah, daabacaadda midabka barta + daabacaadda afar midab ah, ka dib dhimista goynta sameynta, filim dusha sare leh, oo leh xarkaha xarkaha.
5. 350 garaam oo warqad budo ah, dusha sare CMYK +2 daabacaadda midabka pantong, lacagta kulul ee deegaanka + iskuxirka maxalliga ah, dareen dareen aan sinnayn, iyo saliid rogaal celis ah, iyadoo aan loo eegayn midabka iyo qaabka, si cad u muuji alaabada dhamaadka iyo dhadhan; geli geli 1mm warqad jiingado midab daabacaadda midabka pantong, ka dib dhimista-goynta si loo saxo sheyga.
6. 300 garaam oo kaar cadaan ah, 2 midab pantong + CMYK daabacaadda midabka ah, daabacaadda midabkeedu sareeyo ah, hoos uma dhigi doonto muuqaalka sanduuqa; UV Local, oo tilmaamaya astaamaha sheyga, dusha sare ee lagu duubay filim jilicsan, sanduuqa kadib jawiga dhamaadka-sare.
7. fasalka deegaanka 300g kaar cad, 3 pantong + CMYK daabacan, midab dhalaalaya ma noqon doono midab qayb ahaan, dusha hoose submembrane leh UV maxaliga ah, muujinta astaamaha wax soo saarka, daboolka gudaha ee jilicsan taabashada filimka, ka dib markii uu isku laabo sanduuqa nadiif ah oo caafimaad leh iyada oo aan lumin cufnaanta.
8. 300 garaam oo warqad budo ah, 2 midab oo pantong ah + daabacaada CMYK, si loo hubiyo in midabka daabacadu yahay mid cad oo aan midab u eexanayn, LOGO ayaa soo baxaysa ka dib saamayn muuqata oo dheeraad ah, iyada oo daabacaadda qaabaynta midabka pantong ee jiingado la gelinayo si loo hagaajiyo sheyga, loo hagaajiyo heerka wax soo saarka, ka dib markii laminating goynta dhimatay, sanduuqa alaabta ugu dambeysa.
9. 300 garaam oo kaar cadaan ah, oo aan khafiif ahayn, CMYK daabacaadda daboolka filim matte ah, waara oo aan si fudud waxyeello u geysan, ugu dambeyntiina wuxuu dhintaa qaabka sanduuqa usha lagu jaray.
10. 300 garaam oo kaar qalin ah, ka boodi lakab khad cad (meesha maxalliga ah uma baahna in la daabaco khad cad), iyo daabacaadda CMYK + 2 midab pantong ah, si loo hubiyo sanduuqa midabka lebiska, iyo saliid rogaal celin ah, samee lacagta midabka qaybaha sanduuqa ee dhalaalaya, LOGO qalinka kulul, marka la eego iftiinka, midabada iftiinka ka muuqda, ugu dambeyntiina wuxuu u dhintaa sanduuq, alaabooyin go'an oo ay ku jiraan waxyaabo cad oo gudaha ah.
11. 400 g kaar cad, CMYK +2 daabacaadda midabka pantong, si loo hubiyo in midabka sanduuqa uusan ahayn eex, dusha sare ee lagu daboolay filimka matoorka, flash-ka maxaliga ah ee meelaha qaar, meelaha qaarkood waxay leeyihiin saameyn wax ku ool ah, qaabka guud ee sanduuqa waa sharaf leh oo xarrago leh, oo is waafajiya.
12. 350 garaam oo warqad budo ah, CMYK +2 daabacaadda midabka pantong, midabka dusha sare ee sanduuqa oo dabacsan oo dhalaalaya, si loo hubiyo midabka midabka, midabka pantong ee meelaha qaarkood loo isticmaalo, dusha sare ee saliida matte, ha ahaato dhalaalka asalka ah ee warqadda ama khad daabacaadda ayaa la dhimi doonaa, oo ilaali sanduuqa, iyada oo la gelinayo alaabada alaabada go'an.
13. 300 garaam oo kaar cad ah, CMYK +2 daabacaadda midabka pantong, iskuduwidda qumman, waa inay hubisaa midabka qayb kasta oo ka mid ah lebiska sanduuqa, dusha sare ee lagu daboolay filim jilicsan oo taabasho ah, gacmuhu waxay dareemayaan gabi ahaanba kala duwanaansho, UV deegaanka ayaa iftiiminaya shakhsiyadda sheyga, oo ay kujiraan waxyaabo ay ka buuxsamayaan finanka, dhimashadii ugu dambaysay ayaa lagu ridayaa sanduuqyada
Hore: Sanduuqa warqadda ee daryeelka maqaarka waxaa lagu dhejiyaa sanduuqa nooca buugga PVC
Xiga: Alaabada cusub ee tafaariiqda tafaariiqda dib loo warshadeeyay daabacaadda ganaaxa sanduuqa baakadaha hadiyad madhan